Seleria | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fampiasana sy ny fampiasana selera, ny tombontsoa sy ny fahasimbana
Androany, tsy misy sakafo, miaraka amin'ny tranga tsy fahita firy, dia tsy misy seleria. Io legioma maitso io dia manana sakafo be dia be izay mandrindra ny vatana ary manampy amin'ny fitsaboana marary maromaro. Andao hojerentsika hoe inona ny seleria dia tsara sy ny fomba tsara indrindra hampiasana izany amin'ny sakafo. Ny singa simika amin'ny seleria Ny endriky ny legioma ankoatra ny proteinina, ny tavy sy ny voamadinika dia ahitana vitaminina, mineraly ary fibre.
Fambolena sy fikarakarana seleria ao an-jaridaina
Tsy asa sarotra ny fambolena karazan-tsakafo, saingy mitaky loha-hevitra izany. Raha ny zava-misy, dia tsara ny mankafy salady mahavelona amin'ny ririnina miaraka amin'ny legioma miorina eo amin'ny zaridainany. Ny olona iray dia manenika ny vanim-potoana mahamety ny seleria, ny olona tsy te hanome azy ny fotoanany.
Ny mahasoa sy ny fomba fihinan'ny fakan'ny sela
Selerie dia mirehareha eo anelanelan'ny legioma salama tsara indrindra. Na dia tamin'ny taonjato fahiny aza izy io dia nampiasaina ho toy ny zava-mahadomelina ho an'ny zava-mahadomelina. Amin'izao androntsika izao, ny legioma fototra dia fantatra fa tsy fitaovana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, fa koa ho toy ny sakafo matsiro sy mahasoa amin'ny sakafo isan'andro. Ny sela Root Celery Root dia ivon-tsakafo mangatsiaka izay an'ny fianakaviana Umbrella.
Ny tombotsoan'ny selera ho an'ny lehilahy
Ny selam-pahaizana fanta-daza (ravina, loko sy fotony) dia efa nampiasaina hatry ny ela no tsy nampiasa afa-tsy ny hanina sy hanatsara ny tsiron-tsakafo, fa koa amin'ny fomban-drazana nentim-paharazana sy nentim-paharazana, izany hoe fitaovana hanatsarana ny asan'ny lehilahy. Hiresaka momba ny fanasitranana sy ny fomba fampiasana an'io legioma mahafinaritra io ilay lahatsoratra.
Mila manadio ve ny seleria alohan'ny fampiasana azy?
Na dia avy any amin'ny faritr'i Mediterane aza ny fananganana zaridaina, ny kolontsaina dia nahalaza ny lazany tany amin'ny faritra avaratra, anisan'izany Rosia sy Okraina. Fantatra fa ny ampahany rehetra ao amin'ilay zavamaniry dia mety hohanina - avy amina fotsy ho an'ny tongolobe sy ny varimbazaha, saingy tsy ny rehetra no mahafantatra ny fomba hanadiovana ny seleria ary koa raha ilaina izany hanaovana izany.
Karazana fambolena seleria ary mikarakara azy eny an-tsaha
Ny olona dia nankasitraka ny toaka sy ny tsirony avy amin'ny seleria tsy ela toy izao: ity zavamaniry ity dia nampiasaina nandritra ny taonjato maromaro, na dia naverina tamin'ny famaritana grika tranainy aza ireo andinin-teny ireo; Tamin'ny vanim-potoana fahiny, dia nekena ho fanafody fotsiny izany. Amin'izao andro izao, maro amin'ireo mpanohana ny sakafo mahasalama sy mahasalama dia mandray anjara amin'ny sela mitombo amin'ny sehatra tsy miankina.
Karazana fampiasana selera misy pancreatitis
Tsy isalasalana fa ny legioma sy ny voankazo dia misy karazan-tsakafo ilain'ny vatany. Ny fanaovana ny sakafo dia zava-dehibe ny mandinika ny toetry ny fahasalamana, satria, na dia eo aza ireo tahiry vitaminina manankarena, dia maro ireo vokatra ateraky ny aretina sasany. Ny akora simika sy ny votoatin'ny kalôria ny vokatra Eatso ny fototarazo ary ny ampahany maitso amin'ny seleria, izay ahitana: vitamins: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K; Macro sy microelements: boron, calcium, chlorine, vy, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, selenium, solfur, zinc.
Fomba fambolena sy fikarakarana sela fotsy amin'ny tany malalaka
Ny fototeny seleria dia manondro ireo zavamaniry misy vanim-potoana maharitra. Matetika dia manelingelina ireo mpamboly, fa amin'ny toe-java-misy dia tsy sarotra ny maniry sela amin'ny dacha raha omena fomba fanao amin'ny fambolena. Mikasika ny toetoetran'ny fambolena, ary koa ny fitsipika fototra momba ny fikarakarana seleria, vakio etsy ambany.
Inona ny fitahirizana fitsaboana amin'ny menaka, tantely ary seleria
Ny fitsaboana nentim-paharazana dia mahafantatra karazana fanafody voajanahary maro azo antoka ho an'ny vatana. Izy ireo dia afaka manisy voka-dratsy amin'ny faritra misy olana nefa tsy miteraka fihetseham-po ratsy na voka-dratsy hafa. Ny iray amin'ireo tadiavina tena ilaina sy sarobidy ho an'ny fahasalamana dia mifangaro amin'ny voankazo sy tantely ary seleria.
Karazana fambolena karazam-boankazo avy amin'ny voa ao an-trano
Ny fambolena seleriana dia legioma maniry ao amin'ny zaridaina rehetra. Mba hampitombo ny vokatra be dia be ity vokatra ity, dia tokony hifidy ny karazany tsara indrindra ary hanaraka ny soso-kevitra voalaza etsy ambany. Ny toetra mampiavaka ny zavamaniry sy ny karazany Sariera dia anisan'ny kolontsaina zokiolona ao amin'ny fianakaviana elo. Ny endri-javatra manavaka azy dia toy izao manaraka izao: lozam-pifamoivoizana hatramin'ny 1 metatra miaraka amin'ny rosette mavomavo lehibe; Ny ravina dia voasarona, maitso maitso, miaraka amina fofona manitra; Ny voa dia mamorona amin'ny taona voalohany; tavoahangy boribory na tsipìka; ny lokon'ny tuber dia maitso na beige-fotsy, fotsy na fotsy ny pulp; mamony ary manome voa rehefa mamboly.
Ny tombony sy ny fanimbana ny sela ho an'ny vatan'olombelona
Selerie dia iray amin'ireo fambolena zaridaina mahazatra indrindra. Toy izany ihany koa ny fitahirizan'ny vitamina sy ny singa marindrano. Misy karazana angona momba ny zavamaniry, ny tombontsoa sy ny fampiasana azy dia rafitra ao amin'ny lahatsoratra. Famaritana Botanika Selery dia zavamaniry iray na roa taona izay an'ny fianakaviana Umbrella.
Karazana fampiasana seleria ho an'ny gout
Noho ny harenan'ny sela sela dia tena adjuvant mahomby ary ny main ingredient amin'ny zava-mahadomelina gout. Ny fampahalalana amin'ny fomba mahazatra amin'ny toetra tsy mahazatra, ny fampitahana sy ny fomba fampiasana azy dia hanampy anao amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny aretina. Inona no atao hoe gout? Izany no hevi-dandon'ny tohatra, voan'ny aretina amin'ny endokino.
Ireo singa amin'ny fampiasana siramamy seleria
Sariaka dia tian'ny olona maro, ity zavamaniry ity dia afaka mampifaly azy ireo miaraka amin'ny tsiranoka maoderina sy mamy, ary fambolena voajanahary ampy tsara. Na dia izany aza, vitsivitsy ihany no mahalala momba ny fanasitranana ny sokatra amin'io zavamaniry io. Mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny vatana izany, ary hihazona fahasalamana amin'ny sehatra maro. Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tombontsoa lehibe sy ny fanimbana ny jiro selera ho an'ny fahasalamana, ary hazavao amin'ny antsipiriany ny habetsahanao isan'andro sy ny fomba fisotroana fisotroana fanasitranana.
Ny endriky ny selera dia mampiasa ny fahasalaman'ny vehivavy
Miaraka amin'ny fiandohan'ny lohataona eo amin'ny toeram-pivarotana supermercie dia manomboka mihintsy ireo legioma maitso maitso antsoina hoe seleria. Nandritra ny taonjato maro, ity vokatra tsy manam-paharoa ity dia heverina fa tsy fivarotana vitaminina sy mineraly manan-danja ihany, fa koa fanampiana tena ilaina amin'ny ady amin'ny aretina maro mampidi-doza. Ity lahatsoratra ity dia manolotra ny hahafantarana ny karazana seleria, ny toetra mahasoa, ary ny fampiasana sy ny fanoherana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Seleria